Voavaha ny olana Outlook sy Microsoft Exchange ao amin'ny iOS Mail | Vaovao IPhone
Voavaha ny olan'ny Outlook sy Microsoft Exchange ao amin'ny iOS Mail
Vao andro vitsy lasa izay dia niresaka ilay olana nahatonga ny mpampiasa maro adala isika, indray mandeha izao ny olana dia mifandray mivantana amin'ny Mail, izay tsy isalasalana fa iray amin'ireo fampiharana iOS teratany namboarina ratsy indrindra tamin'ny fotoana rehetra, na farafaharatsiny iray amin'ireo izay mirona soloina haingana ny mpampiasa. Na izany aza, farany dia hitan'i Apple fa mety ny mamaha azy olana iray izay niantraika tamin'ny mpampiasa maro.
Nampita izy ireo fa nanomboka niasa sy izay efa nataony, niaraka tamin'ny fanavaozana omaly, iOS 11.0.1 dia nametraka tamim-pahalalana ny olana izay nahatonga ny Mail tsy hifandray tsara amin'ireo mpizara mailaka an'ny Microsoft manokana, samy Exchange sy Outlook ary Office 365.
Niezaka nanamarina izahay hoe inona ny tena vaovao nafenin'ny iOS 11.0.1, ary ny zava-misy dia hitanay indrindra ny vahaolana amin'ny olan'ny LAG kely amin'ny fitendry izay farafaharatsiny nahavita namaha haingana izy ireo, na izany aza. Toa tsy voavaha ny fikirakirana ratsy an'ireo hafatra manjavozavo ao amin'ny WhatsApp, ary koa olana hafa sarotra, dia ny an'ny bateria. Marina fa nihatsara kely ny bateria niaraka tamin'ny iOS 11.0.1, saingy mbola lavitra lavitra ny fanolorana ny fampisehoana hitantsika tao amin'ny iOS 10.3.3.
Na izany aza, ny hafatra nampahatsiahy antsika izany «Tsy afaka nandefa ny mailaka. Ny hafatra dia nolavin'ny mpizara «. Farafaharatsiny mba nanome toky ny ekipan'ny Cupertino fa niara-niasa tamin'i Microsoft izy mba hamahana ity olana ity ary efa nisy izany. Ireo karazana olana amin'ny mailaka ireo dia mety handratra mafy ireo mpampiasa iOS maro izay misafidy ny hampiasa Mail ho mpitantana mahazatra azy ireo, Amin'ny maha tendro anao manokana dia araraoty ny Spark, Outlook na Newton ho safidy tsara kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 11 » Voavaha ny olan'ny Outlook sy Microsoft Exchange ao amin'ny iOS Mail
Podcast 9 × 04: Mampihoatra ny iPhone 8 ny iPhone X
Nanamafy i Apple fa manana olana amin'ny headset ny iPhone 8